Ciyaaraha chess-ka ugu fiican PC | War gadget
Paco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | La cusbooneysiiyay 09/04/2021 18:39 | General, Videogames
Haddii uu jiro kulan guddi caadi ah oo madadaalo leh, oo ahmiyad gaar ah u leh in la guuleysto, taasi shaki la’aan waa Chess, ciyaar guddi oo istiraatiijiyad iyo ka feker ku saabsan tallaabo kasta oo taxaddar leh ay fure u noqon doonto in lagu dhammaado guul. Ciyaartani waxay aragtay bilowgeedii 600/800 sano Masiixa kadib mana ahayn ilaa qarnigii XNUMXaad ee ay gashay Spain iyadoo loo marayo Carabta. Shaki la'aan, ciyaar taariikhi ah oo weli da 'yar inkasta oo ay lumisay uumi badan da'da dhijitaalka ah.
Waqtigan xaadirka ah aad ayey noogu badan tahay inaan helno qof ciyaaraya ciyaarta Chess. Xilligii taleefannada gacanta iyo ciyaaraha fiidiyowga, waxay umuuqataa mid adag in la arko wiil ama nin da 'dhexaad ah oo ciyaar ku ciyaaraya sabuuradda caadiga ah, sidaa darteed ikhtiyaarka ugu fiican haddii aan dooneyno inaan ku ciyaarno chess waa inaan ku sameynaa qaab muuqaal ah ciyaar. Laakiin Kaliya ciyaar maahan, chess waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay ciyaar sirdoon iyo tartamo waa weyn oo adduunka oo idil laga ciyaaro oo leh ciyaaro socon kara 6 saacadood. Qodobkaan waxaan ku arki doonnaa cayaaraha chess-ka bilaashka ah ee PC-ga loo soo bandhigey.
1 Ciyaaraha Chess ee kombuyuutarka
1.3 Titanada Chess
1.4 Chess Zen: Mate hal
1.6 Chess Shredder
1.7 Miisaska Miisaska Miisaska
2 Shabakadaha lagu ciyaaro shaxda
2.2 Chess 24
Ciyaaraha Chess ee kombuyuutarka
Waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa liistada yar ee kuwa ugu xiisaha badan ciyaaraha chess ee aan ka heli karno mashiinka kombuyuutarka, dhammaantood waxay leeyihiin lacag bixin ama lacag la'aan ah dalabka ciyaaryahanka. Waxaan ka heli karnaa ciyaarta caadiga ah 2 cabbir ama ciyaaro aad u faahfaahsan oo ku saabsan 3 cabbir leh sawiro macquul ah.
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah ciyaaraha chess-ka oo leh shaxanka ugu fiican, ciyaar si gaar ah diiradda loo saaray ciyaartoydan khibrada yar ee doonaya inay ku raaxaystaan ​​khibrad qancinaysa sida ay isha ugu qanacsan tahay. Cinwaan aad u waxaa kugula taliyay kuwa waa weyn ee ciyaartan oo leh faallooyin iyo keyd ballaaran oo qaar kamid ah, sida kii weynaa ee Kasparov. Ciyaartan sidoo kale waxay falanqeyneysaa habka aan u ciyaareyno si aan nafteena ugu dhigno darajo isla markaana aan ula jaanqaadno kuwa naga soo horjeeda isla heerkaas.
Waxaan leenahay gole gudaha ah oo aan ku kala saari karno shakiga ciyaartoyda kale ama aan wax uga dhihi karno riwaayadooda lagu arkay kulamada kale. Laakiin laakiin ciyaartan weyn waa qiimaheeda waana mida ku kacaysa € 50 sidaa darteed inkasta oo ay tahay ciyaar lagu raaxeysto hadana qiimaheeda waa waxoogaa mamnuuc ah haddii aan kaliya dooneyno inaan ciyaarno hal ciyaar.
Waxaan soo bandhignay qeybta garaafka ee ciyaartii hore Chess Ultra-kaniina kama fog yahay arrintan, maadaama ay tahay mid ka mid ah ciyaaraha chess-ka oo qaybta farsamada ugu fiican liiska ku jirta. Ciyaartu waa ay ina tusi kartaa sawirada ilaa 4K qaraarka asalka ah. Waxay leedahay qaab hal ciyaariyahan iyo qaab ciyaartooy badan oo weyn oo aan ka heli karno tartan isla markiiba.
Haddii waxa aan raadineyno ay tahay inaan kaligeen ciyaarno, waxaan heysanaa qaabab ciyaar oo dhowr ah iyo sirdoon farsameysan oo aad loo shaqeeyay, oo na siinaya ciyaaro aad u adag oo waqti dheer soconaya sidii ay aheyd ciyaar dhab ah. Ciyaar si heer sare ah loogu taliyay taageere chess kasta. Si ka duwan tii hore, midkani wuxuu leeyahay qiime aad u soo jiidasho leh oo ah .5,19 XNUMX oo hadda ku jira Steam.
Hadda waxaan la soconnaa ciyaarta ugu horreysa ee bilaashka ah liiska waxayna noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican tan iyo markii ay ku raaxeysato qayb farsamo oo wanaagsan iyo qaddar wanaagsan oo faahfaahin ah. Waxay bixisaa heer sare oo faahfaahsan oo ku saabsan labada loox iyo gogo '. Ciyaar aad caan u ah oo ka mid ah taageerayaasha chess maxaa yeelay waa lacag la’aan iyo bulshada weyn ee la socota darteed.
Waxaan leenahay heerar kala duwan oo dhib ah si aan ugu raaxeysan karno ciyaarta iyadoo aan loo eegin awooddeena. Waxaa lagugula talinayaa inaad bilowdo hooseyn haddii aan miridh nahay. Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, ciyaarta gabi ahaanba waa bilaash oo waxaan ka soo dejisan karnaa taada Bogga shabakadda.
Chess Zen: Mate hal
Waxaan ku nimid waxa ka mid ah kuwa ugu fudud uguna koobnaanta badan liiska, oo leh qaab aad u yar wuxuu ina xusuusinayaa wax badan oo ka mid ah ciyaarta moobiilka marka loo eego tan kombiyuutarka, oo leh qayb garaaf ah oo fudud. Chess-kan 'Zen Chess' wuxuu diiradda saarayaa dhagaystayaasha aan joogtada ahayn ee doonaya inay ciyaaraan ciyaaro dabacsan oo deg deg ah oo aan xamaasad badan lahayn.
Nos waxaan helnaa caqabado badan oo aan ka gudubno oo ay abuureen sayidyada adduunka ugu fiicanMarkaan horay u socono, caqabadaha waxay noqdaan kuwo sii adkaanaya, inkasta oo ujeedkeenu markasta isku mid yahay, in la hubiyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo dhammeeyo guusha ciyaarta. Qiimaheeda sidoo kale waa mid fudud waana ka heli karnaa gudaha Steam € 0,99, aad ayaa lagula taliyay haddii waxa aan raadineyno ay yihiin uun madadaalo.
Lucas Chess waa ciyaar u taagan inay ahaato il furan, marka si bilaash ah ayaan uga soo dejisan karnaa degelkeeda. Waxaan leenahay ilaa 40 hababka ciyaarta taas oo aan ka bilaabi karno salka si aan u sii fiicnaano illaa aan u ciyaareyno ciyaaro sida sayid run ah. Cilmiga macmalka ah wuxuu si fiican ula qabsadaa heer kasta oo dhib ah taas Heerkeeda ugu sarreeya, waxay na siisaa ciyaaro epic tayo sare leh.
Waxaan leenahay qaab ciyaartoy badan si aan ugu wajahno ciyaartoy adduunka oo idil leh tayo aad u wanaagsan. Muuqaalada ciyaarta tiro ka mid ah goobaha iyo qaabeynta sidaa darteed waan badali karnaa ciyaaraha waqti kasta oo sidaas darteed ma joojin karno ciyaarta haddii wax aysan ahayn sida aan dooneyno.
Ciyaar aad u xiiso badan oo laga bilaabi doono adduunka shaxda, maaddaama ay tahay barnaamij loogu talagalay oo loogu talagalay barashada. Waxay leedahay abaalmarino badan oo takhasus gaar ah u leh waaxda fudeydkeeda iyo iyada tiro badan oo heerar adag, taas oo u oggolaanaysa la qabsiga nooc kasta oo ciyaartoy ah. Waxa ugu fiican ee barnaamijkan ku saabsan ayaa ah inuu yahay qaab isku-dhafan oo waxaan ka heli karnaa kombuyuutarrada iyo mobilada labadaba, sidaa darteed aad ayaa loogu talinayaa.
Cilladdeeda ugu weyn waxay ku jirtaa qiimaha Mana ahan ciyaar raqiis ah, qiimaheeda waa € 70 inkasta oo ay leedahay nooc tijaabo ah oo 30-maalmood ah oo loogu talagalay Mac ama Windows, halka nooca mobilada uu ku kacayo ilaa € 10 oo uu leeyahay nooc bilaash ah oo laga jaan qaadi karo haddii aan caadi ahayn ciyaartoy.
Miisaska Miisaska Miisaska
Sida magaceedu sheegayo, waa jilid weyn oo ciyaarta ah, waxay heshay caan badan sannadihii la soo dhaafay sababo la xiriira noocyo kala duwan oo kala duwan, laakiin waxay xoojineysaa dhinaca ciyaarta ciyaarta ciyaarta lagula taliyay in badan oo ka mid ah kulamada loogu talagalay chess. Si ka duwan kuwa kale, kulankaan wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno ciyaar aan ku jecelahay sharcigeenna, samaynta chess-ka inay joojiso chess-ka.
Sidoo kale, sidaan soo sheegnay, waan ciyaari karnaa ciyaaro kale oo badan oo taariikhi ah, sida jeegaga, kaararka, domino-yada ama xitaa Warhammer. Waxaan leenahay qaab online ah oo aan kula ciyaarno ciyaartoy adduunka oo idil iyada oo loo marayo server-yada Steam. Isdhexgalka ciyaartani waxay tahay in haddii ciyaartu u socon weydo sidii aan filaynay, waxaan soo bandhigi karnaa dhammaan xanaaqeenna ka dhanka ah guddiga ciyaarta oo waxaan ku dhammeyn karnaa ciyaarta dariiq adag, in kastoo laga yaabo in kooxda naga soo horjeedaa aysan aad u maaweelin. Ciyaarta ayaa laga heli karaa gudaha Steam € 19,99 qaabkeedii caadiga ahaa ama € 54,99 qaybteeda baakadka 4 ah oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Shabakadaha lagu ciyaaro shaxda
Halkan waxaan dooneynaa inaan ka helno degello internet ah oo aan kaga ciyaari karno shaxda internetka iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo codsi kombuyuutarkeena ahSidoo kale ma lihin shuruudihii ugu yaraa tan iyo markii aan ka ciyaari doonno qulqulka ka socda shabakadda internet-ka ee aan jecel nahay.
Websaydh caan ah oo dhammaystiran oo aan ka heli karno tiro ka mid ah makiinadaha ciyaarta iyo guddiga darajooyinka halkaas waxaan ka heli karnaa in ka badan 5 milyan oo kulan oo ka kala yimid dhammaan qaybaha dunida. Haddii aan rabno inaan ku ciyaarno khadka tooska ah, waxay inala jaan qaadi doontaa kuwa naga soo horjeeda iyadoo loo eegayo heerka xirfadeena. Waxaan leenahay hal ciyaariyahan oo aan ku dooran karno dhibaatada.
Barnaamijkan shabakadda wuxuu ka kooban yahay dejinno badan ciyaarta, inkasta oo ay umuuqato mid fudud laakiin waa wax sifiican loo shaqeeyay oo faa iido weyn ayaa ah inaan ka heli karno madal kasta oo aan ku leenahay shabakad isku xiran oo isku xiran.
Kuwa kale Degel caan ah oo ka mid ah taageerayaasha chess, degelkan waxaan ku tijaabin karnaa xirfadaheena ciyaartoyda kale ee khadka tooska ah, iyo sidoo kale inaan la ciyaarno caqli awood badan oo farsamo. Waxaan sidoo kale helnaa talooyin iyo casharro fara badan si kor loogu qaado xirfadaheena loona noqdo tartan sii kordhaya.
Haddii aan wax weydiinno waxaan helnaa dhammaan noocyada macluumaadka iyo dukumiintiyada ay bixiyeen saynisyahannada ugu fiican, iyo sidoo kale guddiga wararka halkaas oo aan ka heli karno dhammaan wararka ku saabsan chess ama dhacdooyinka soo socda. Sida degelkii hore, tan waxaa looga isticmaali karaa aalad kasta oo leh bog internet isku dhafan, sidaa darteed waxaan uga raaxeysan karnaa moobilkeena.
Haddii chess uu gaabiyo oo aan raadineyno shucuur ka xoog badan, waan eegi karnaa tan kale liiska ciyaarta fiidiyowga ee aan ka helno cayaaraha mootooyinka ugu fiican PC. Waa in la dhaho waan u furannahay wixii talo bixin ah waana ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawiyo faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Guriga » Videogames » Ciyaaraha chess ee ugufiican PC